FJKM – Foibe
RINDRANDAMINA FOIBE FJKM
ANTSO MANGA 2022
1 KORINTIANA 16.13-18
Tafiditra ao anatin’ny famaranan-teny ataon’i Paoly ao amin’ity Epistiliny ho an’ny Korintiana ity mofonaina ity ka hanamafisiny amin’ny :
1-Mba tsy ho varimbariana (and13)
« Miambena ianareo ,tomoera tsara amin’ny finoana , aoka hitomban-dahy ,mahereza« .Ny hevitry ny hoe : « miambena » dia hoe: « »miareta tory » Izany hoe : ho « malina » , ho « vonona amin’ny fotoana » rehetra ka tsy ho tampoka aminy ny zavatra mety hitranga na inona na inona ,satria velona ny finoany , matanjaka ny finoany ka afa-miatrika ny zavatra rehetra .Ianao koa , aoka hafana tsara ny fiainam-bavaka ary hivelomana ny Tenin’Andriamanitra dia tsy hisy ho tampoka aminao .
2-Hiasa amin’ny fitiavana (and14)
« Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin’ny fitiavana« . Ampitain’i Paoly izany eto mba hahatsiarovan’ny Korintiana fa zava-poana avokoa ny zavatra rehetra raha tsy tam-pitiavana no nanaovana azy .Fanamafisan’ny apostoly izay efa nolazainy ao amin’ny 1 Kor 13 hoe: : »na dia miteny amin’ny fitrenin’ny olona sy ny anjely aza aho , kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina maneno ny kipantsona mikarantsana aho » .Ianao koa, mianara amin’i Jesoa .Ataovy amin’ny fitiavana ny zavatra rehetra na inona izany na inona.
3-Hankato izay mikely aina (and15-18)
« Mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny … » hoy i Paoly eto. Ny kristiana dia manana adidy araka izany hankato ny mpanompon’Andriamanitra misahirana aminy fa tsy hanohitra na hanangana azy ireny ho fahavalo sanatria .
Ahoana ny fandrefesanao ny tenanao raha tarafina amin’ireo voalaza ireo ?
Dia hahita masoandro
Ny ankizy rehetrarehetra
Fa hahatsiaro ho tena tiana
Ireny zaza maro ireny.
Ho voahaja koa ny zony
Fa tsy ho lasa teny foana,
Satria voataiza ireo rehetra
Miandraikitra azy ireny
Mba handala ny fisiany.
Dia hiaina am-piadanana
Ny ankizy Malagasy!
Ary tsy ny maha olona
Azy ireny fotsiny ihany
No ho voahevitra, voajery,
Fa indrindraindrindra koa
Ny maha olona azy feno:
Zaza manana fanahy
Ary tena manan-jo
Ny ho zanak’Andriamanitra,
Ka hifaly mahatsiaro
F’efa zandrin’i Jesoa.
Dia tsy hoe ny zony ihany
No hisitrahan’izy ireny,
Fa ny adidiny ihany koa
No ho fantany sy hefainy:
Ho zaza hendry, mpankato!
Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana DATY VAKITENY 01 1 Tim 1.12-17 02 Eks 35.20-29 03 2 Mpanj 6.1-7 04 Efes…..
VONTOSY FILAZANTSARA NY NOSY MADAGASIKARA ! Dia hahita masoandro Ny ankizy rehetrarehetra Fa hahatsiaro ho tena tiana Ireny zaza maro ireny……
FIFANDRAISANA SP SYNODAMPARITANY PREZIDA SYNODALY FINDAY E-MAIL 1 SP AFOVOANY ANDREFANA (01) RANDRIANARISAINA Harilaza 033 71 946 04 harilaza01@gmail.com 2…..
Rindrandamin’ny SEKOLY FJKM